Madaxweynaha Puntland oo Furay Imtixaanaadka Shahaadiga ee Dugsiyada Sare iyo Dhexe (sawiro) – Radio Daljir
Maajo 18, 2019 11:56 b 1
Garoowe, May, 18, 2019: Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa dugsiga sare ee Gambool ee magaalada Garoowe ku daah-furay Imtixaanaadka Shahaadiga ee dugsiyada Sare iyo dhexe ee Puntland, kaas oo ay u farisanayaan arday dhan 15,892 arday, waxaana ay ka qabsoomayaan 106 goobood oo ku yaala dhammaan golada Puntland.
Madaxweynaha waxaa furitaanka Imtixaankan ku wehlinyay Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo masuuliyin kale. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda Puntland ay si wanaaagsan xil isaga saartay Imtixaankan diyaarintiisa, isla markaana ay salka u dhigtay qorshe adag oo ku dayasho mudan, kaas oo lagu gaarsiiyey dhammaan gobolada Puntland.
“Waxaa ilaahay mahaddiis ah dhulka Puntland oo aad u ballaaran, cirif ilaa cirif oo meelaha qaybtood laga yaabo 1,000KM iyo ka badan inay isu jiraan,duruufo kala adag ku jiraan, dhulka oo aad u fog fog oo ay dhici karto meelaha qaar in doonyo lagu geeyo oo baaruurtu aysan gali karin, in kulli ay Wasaaraddu ku guulaysatay in Imtixaanada Saacadaan maanta la joogo ay kulli waqti isku mid ah ka fulayaan, runtii ilaah ayaan ugu mahadnaqaynaa, waana guul ay gaartay Wasaaradda Waxbarashada Puntland oo runtii tijaabo iyo Tusaale u noqon doonta gayiga Soomaaliyeed dhammaantiis”. ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni.
Madaxweynaha dowladda Puntland oo ka hadlaayey heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray hannaanka loo qaado Imtixaanaadka Puntland 20 sano ee ay jirto, waxa uu caddeeyay In Puntland ay guul ka gaartay waxkasta oo looga baahnaa imtixaanaadka, isla markaana ay diyaar u yihiin inay la wadaagaan Khibraddaas Dowladda Federaalka iyo dowladdaha Xubnaha ka ah.
“Waxaana rajaynaynaa khibradaas iyo waayo aragnimadaas muddada dheer soo socotay inaan la wadaagno goobaha kale, deegaanada kale, dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah DFS inaan u gudbino khibraddaas iyo sida loo maamulo” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Ugu dambayn, Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Alle ka baryey in imtixaanku uu ku dhammaado guul, ardayduna ay la yimaadaan natiijo wanaagsan, waxaana uu u mahadceliyey Masuuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada dowladda Puntland iyo Howl wadeenadeeda.
Garacad deked noocee ah ayay yeelan doontaa ? (daawo)
Abdinaaasir daaacad 7 months
Guulaysta dhamaaan ardayda ufariisanaysa imtixaamka shahaadiga .